Jumlo-weyn oo tuubbada fidsan ee saaraha iyo alaab-qeybiyaha batroolka |JL
Tuubada TPUWaxay u dhaxaysaa caag iyo caag, oo leh astaamo aad u wanaagsan, aynu raacno Jiangsu Jinluo New Material Technology Co., Ltd. si aan wax uga ogaano!
1. Xiro aad u wanaagsan oo iska caabin ah: qiimaheeda xidhashada Taberku waa 0.35-0.5mg, kaas oo yar iyo dhexdhexaad ah oo balaastik ah.Ku darida saliidda waxay yareyn kartaa is-jiidhka waxayna sii wanaajin kartaa caabbinta xirashada.
2. Xoog jilicsanaanta iyo dhererka: xoogga xajinta ee TPU waa 2-3 jeer ka mid ah caag dabiici ah iyo caag synthetic.Xoogga jilicsan ee polyester-ka TPU waa＞60MPa iyo dhererka waa 410%.Awoodda xajinta ee TPU polyurethane waa 50MPa iyo dhererka waa 550%.
3. Oil caabbinta: caabbinta saliidda ee TPU way ka fiican tahay tan NBR, oo leh nolol caabbinta saliideed oo aad u fiican.
4. TPU waxay ka sareysaa caag dabiici ah iyo caag kale oo synthetic ah ee iska caabinta heerkulka hooseeya, caabbinta cimilada iyo caabbinta ozone.Iska caabinteeda ozone iyo iska caabbinta shucaaca waxay leeyihiin codsiyo gaar ah warshadaha hawada sare.
5. Nadaafadda caafimaadka cuntada: TPU waxay leedahay noole ku habboonaanta iyo xinjirowga lidka ku ah, TPU caafimaad ayaa aad iyo aad loo isticmaalaa.Sida xididdada dhiigga, kaadi mareenka, tuubooyinka faleebada.TPU waxaa si weyn loogu isticmaalaa warshadaha cuntada sababtoo ah waa mid aan sun ahayn oo aan dhadhamin.
6. Kala duwanaanshaha qallafsanaanta: adkaanta TPU waa 10a-80d, waxayna leedahay astaamo isku mid ah oo qallafsan oo ka hooseeya 15A.TPU-gu waa dabacsanaan marka uu engegan yahay ka sareeyo 85A, taas oo ah sifo aanay lahayn elastomerers kale.Sidaa darteed, TPU waxay leedahay awoodda taageerada culeyska sare iyo saamaynta nuugista iyo dheecaanka wanaagsan.
7.Tuubada TPU waxaa guud ahaan loo qaybiyaa nooca polyester-ka TPU, nooca polyether-ka TPU iyo poly (styrene) iyo poly (caprolactone) nooca TPU tuubada.
Fiiro gaar ah: Halbeegyada sida dhexroorka gudaha, dhumucda gidaarka, miisaanka, cadaadiska, midabka, iwm. ayaa loo habeyn karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha.
Sharaxaada habka wax soo saarka iyo wareegga dhalmada
Xulashada alaabta ceeriin → →Lakabka qalfoofka tuubada tidcan → → → → → → → Daabacaadda cadaadiska biyaha → → → → → Daabacaadda → → Bakhaarka → → Baakadaha la dhammeeyey → → rarka iyo gaadiidka
Sharaxaada habka wax soo saarka iyo xilliga dhalmada ee tuubada poliurethane
1. Xulashada alaabta ceeriin
Iibso fiilo polyester-ka u dhigma iyo alaabta ceeriin ee TPU (qalabka cayriin ee tayada sare leh)
2. Fiilada polyester-ka ayaa lagu rakibay muraayadda si loo soo saaro lakabka qaab-dhismeedka tuubada iyo kormeerka tayada ee dunta warshadaha polyester
Hore: Tuubooyinka Biyaha ee Waraabka oo leh Miisaan Fudud, Hawada Degdegga ah iyo Dabaysha Fudud
Xiga: Tuubbada Biyaha ee TPU oo leh dhexroor gudaha ah oo la bedeli karo, dhumucda gidaarka, miisaanka, cadaadiska, midabka, iwm.